देशले धेरै दुःख पायो - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
देशले धेरै दुःख पायो
असारको अन्तिम सातादेखि साउनको मध्यसम्म सडक दुर्घटनामा दैनिक २० नेपालीको ज्यान गएको थियो । मध्य साउनपछि बाढी पहिरोको प्राकृतिक प्रकोपले लाग्छ नेपाल आफै सुशासनमा सक्षम नभएको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा देशले धेरै दुःख पाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा भन्दा पनि सडक दुर्घटनामा मर्नेहरु ज्यादा भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्ने कसको तागत ? तर पनि हामी समृद्ध भएका भए यस्ता विपत्ति पनि हामी पार लगाउन सक्थ्यौं । अहिले त मुल कानुन नै छैन ।
रोजगारी नपाएर लाखौं युवा जनशक्ति विदेश पुगो छन् । यो हिसाबले विदेश जाने संख्या नरोकिए गाउँ शुन्य हुने अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता छैन । दलहरु आफ्नै दलभित्र विभाजित छन् । उनीहरु अरु दलसँग के सहमति गर्न सक्छन् ? राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आइतबार २७ दललाई आफ्नो निवासमा आमन्त्रण गरेर सहमति गर भन्दैमा दलहरु कहाँ मान्छन् र ? दलहरुमा उही पुरानो धङधङी छ । सहमति भन्दा पनि काम चलाउन भइसकेका प्रधानमन्त्रीको राजनीना मागेर बसिरहेका छन् । सहमतिका लागि सबै दल मिलेर सहमतिको प्रधानमन्त्री यही हो भनेर नाम किन तोक्न सक्दैनन् ?
देश कठिन मोडमा छ । यो अवस्था सजिलै पार लाग्ने अवस्था छैन । हिजो २०१७ साल लाग्दा देश तीन दशक पछि प¥यो । अब अर्को अधिनायकवाद लाग्दा कति पछि पर्ने हो सबै सचेत नागरिकको यही चिन्ता छ ।